Xiaomi ဖုန်းအသုံးပြုသူများ အကြိုက်တွေ့စေမည့် Mi Max2ရဲ့ ထင်ရှားတဲ့ အချက် (၅) ချက် | Than Dana
Home » News » Xiaomi ဖုန်းအသုံးပြုသူများ အကြိုက်တွေ့စေမည့် Mi Max2ရဲ့ ထင်ရှားတဲ့ အချက် (၅) ချက်
Xiaomi ဖုန်းအသုံးပြုသူများ အကြိုက်တွေ့စေမည့် Mi Max2ရဲ့ ထင်ရှားတဲ့ အချက် (၅) ချက်
- Updated March 17, 2018
မကြာခင်ရက်ပိုင်းကပဲ Xiaomi ရဲ့ Mi Max2Model အသစ်ကိုမိတ်ဆက်ပေးခဲ့တာ အားလုံးသိကြပြီးဖြစ်မှာပါ။ မကြာခင်အချိန် တပါတ်၊ နှစ်ပါတ်အတွင်းလောက်ဆိုရင် ပြည်တွင်းစျေးကွက်ကို Mi Max2များစတင်ဝင်ရောက်လာတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် Mi Max2ကိုမျှော်လင့်စောင့်စားနေကြတဲ့ Fans တွေနဲ့၊ Mi Max2ကို ဝယ်ဖို့စဉ်းစားနေကြတဲ့မိတ်ဆွေတို့အတွက် ရွေးချယ်ဝယ်ယူရလွယ်ကူစေဖို့အတွက် Mi Max2ရဲ့ အဓိကရွေးချယ်ဖို့ကောင်းတဲ့ အချက် (၅) ချက်ကိုဖော်ပြလိုက်ရပါတယ်ခင်ဗျာ။
Mi Max2ဟာ ယခင် Mi Max မှာတုန်းကလိုပဲ 6.44″ ရှိတဲ့အတွက် Screen size ကြီးမားပြီး ပေါ့ပါးတဲ့ Design ရှိတာတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် Mi Max2ဟာ Smartphone တလုံးဖြစ်ပေမယ့် စျေးကွက်ထဲမှာရှိတဲ့ အခြားပြိုင်ဘက် Smartphones များထက် 43% Display size ကြီးမားတာကြောင့်လည်း Screen size ကြီးကြီးကြိုက်တတ်တဲ့ Users များအတွက်ကတော့ အဓိကရွေးချယ်စရာတခုဖြစ်နေမှာပါ။
Power Bank တလုံးကဲ့သို့ ကြီးမားတဲ့ Battery Capacity ပါဝင်မှုဟာလည်း Mi Max2ကို ပိုပြီးလူကြိုက်များစေတဲ့အချက်တခုလို့ပြောရမှာပါ။ Mi Max2မှာ ယခင် Mi Max ထပ်ပိုမိုပြီး Battery Capacity ပိုကြီးမားပြီး အခြားပြိုင်ဘက် Smartphones များထက်လည်း Battery စွမ်းဆောင်ရည်ပိုမိုမြင့်မားတဲ့ 5,300 mAh Battery ကိုတပ်ဆင်အသုံးပြုထားတာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် Mi Max2ကို အားအပြည့်သွင်းပြီး အသုံးပြုမယ်ဆိုရင် (၂) ရက်လောက်ကို Battery အသာလေးအသုံးခံနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ Battery Capacity များတာကြောင့် အားသွင်းရတာကြမှာလည်း စိုးရိမ်စရာမလိုပါဘူး။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ Mi Max2မှာ Quick Charge 3.0 အပြင် Parallel charging စနစ်ကြောင့် (၁) နာရီကို 68% အားသွင်းနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
Mi Max2ရဲ့ Body တခုလုံးကို သတ္တုကိုယ်ထည်အပြည့်အသုံးပြုထားခြင်းဟာလည်း Mi Max2ရဲ့ စွဲမက်ဖွယ်အချက်တခုလို့ပြောရမှာပါ။ ဒါ့အပြင် Mi Max2ရဲ့ နောက်ဘက်ကိုယ်ထည်အပေါ်နဲ့ အောက်ခြေဘက်မှာဆိုရင် ဖုန်း Antenna များကို Apple iPhone 7/7Plus မှာလိုမျိုး Unibody Design နဲ့ လိုင်းများမြှုပ်ပြီး အလှဆင်ထားတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။
ယခင် Mi Max မှာ လူကြိုက်နည်းခဲ့တဲ့ Camera ပိုင်းကို ယခု Mi Max2မှာတော့ အတော်လေးအဆင့်မြှင့်ထားတာတွေ့ရပါတယ်။ ဒါကတော့ 12MP Sony IMX386, 1.25μm (Large pixel camera) ကိုအသုံးပြုထားတာဖြစ်ပါတယ်။ ၎င်း Mi Max2မှာအသုံးပြုထားတဲ့ Camera sensor ဟာ မကြာခင်ကထွက်ရှိထားတဲ့ Flagship ဖုန်း Mi6ရဲ့ Primary image sensor နဲ့အတူတူပဲဖြစ်ပါတယ်။
Mi Max2ရဲ့ နောက်ထပ်ထူးခြားတဲ့အချက်တခုကတော့ Stereo speaker (Dual speaker) အသုံးပြုထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒီနေရာမှာ Stereo speaker အကြောင်းအနည်းငယ်ရှင်းပြဖို့လိုအပ်မယ်ထင်ပါတယ်ခင်ဗျ၊ Mi Max2ရဲ့ Stereo speaker ဟာဒီတိုင်းသာမာန်အသုံးပြုစဉ်မှာ Stereo mode အလုပ်လုပ်မှာမဟုတ်ပါဘူး။ Landscape mode (Screen ကို အလျားလိုက်) အသုံးပြုတဲ့အခါမှသာ Stereo mode အလုပ်လုပ်မှာဖြစ်တဲ့ Intelligent stereo speaker ပဲဖြစ်ပါတယ်။
အဆိုပါ Mi Max2ကို RAM 4GB/ ROM 64GB နဲ့ RAM 4GB/ ROM 128GB ဆိုပြီး (၂) မျိုးထုတ်လုပ်ရောင်းချခြင်းဖြစ်ပြီး ပြည်တွင်းစျေးကွက်ကိုစတင်ဝင်ရောက်ချိန် ခန့်မှန်းစျေးနှုန်းများကတော့ Mi Max24/64GB Model အတွက် 360,000 ~ 380,000 MMK ဝန်းကျင်နဲ့ Mi Max24/128GB Model အတွက် 430,000 ~ 450,000 MMK ဝန်းကျင် ခန့်ရှိကြမယ်လို့ ခန့်မှန်းရပါတယ်။
ဒီအချက်တွေလောက်ဆိုရင် Xiaomi Mi Max2ဖုန်းကို ဝယ်ရင်ကောင်းမလား (သို့မဟုတ်) စဉ်းစားရွေးချယ်ရခက်နေသူများအတွက် ရွေးချယ်စဉ်းစားတတ်လောက်ပြီလို့ထင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
Topics: Mi Max2Xiaomi
Previous Post Mi Credits ဆိုတာဘာလဲ? Forum Credits ဆိုတာဘာလဲ? အဲ့ဒီ Credits တွေရဲ့ကွာခြားပုံ အသုံးဝင်ပုံတွေကဘာတွေလဲ?
Next Post အဆင့်မြင့်နည်းပညာများအသုံးပြုထားတဲ့ Ninebot Plus နဲ့ Mi Laser Projector တို့ကို Xiaomi မိတ်ဆက်
April 9, 2018 2810CommentsBy: Kyaw Hpone Naing
April 9, 2018 3910CommentsBy: Kyaw Hpone Naing
April 9, 2018 2860CommentsBy: Kyaw Hpone Naing